नेपाल सहित सबैलाई आममाफी दिए, आउनुस् मिलेर काम गरौँ: केपी ओली। - Malayakhabar
होम पेज फिचर नेपाल सहित सबैलाई आममाफी दिए, आउनुस् मिलेर काम गरौँ: केपी ओली।
नेपाल सहित सबैलाई आममाफी दिए, आउनुस् मिलेर काम गरौँ: केपी ओली।
काठमाडौं := प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएको दिनदेखि झन् खलबलिएको एमाले एकता अझ पछाडि धकेलिएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो अडानहरू प्रष्ट राखिरहेका छन् । अहिले संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएकै आधारमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि एमालेमा बस्ने कि नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा विभाजित देखिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहलाई पार्टीमा ल्याउन ‘साम, दाम, दण्ड र भेद’ को सूत्र प्रयोग गरिरहनुभएको छ । तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय ओलीले सबैलाई आममाफी दिने घोषणा गर्नुहुँदै पार्टीमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल समूहले भने अब अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ ।
एकले अर्को पक्षलाई गलाउन अनेक प्रयत्नहरू भइरहे पनि एमाले नेता र कार्यकर्ताहरूको अभिव्यक्ति उग्र बन्दै गएपछि अहिले ओलीले फेरि फकाउन रणनीति लिनुभएको छ । नेता नेपाललगायत २२ जना सांसदहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिए पनि ओलीले तत्काल कारबाही नगर्ने संकेत गर्नुभएको छ । स्पष्टीकरणपछि आफनो रणनीति तय गरिरहेको नेपाल पक्षलाई उहाँले आममाफी दिने घोषणा नै गर्नुभयो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको बताउनुहुने ओलीले बिहीबार असन्तुष्ट पक्षलाई आममाफी दिने बताउनुभएको हो ।
ललितपुरको च्यासलमा आयोजित पुष्पलाल स्मृति कार्यक्रममा उहाँले बाटो बिराएकालाई माफी दिएर अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैलाई एकताका लागि भन्न चाहन्छु एम्नेष्टी इज ग्रान्ट्रेड । बाटो बिराएका साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु । आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आफू हदैसम्म लचिलो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव पनि गरेको बताउनुभयो । आफूले दोस्रो अध्यक्ष बन्नका लागि प्रस्ताव गरे पनि नेपालले स्वीकार नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपाल पक्षका कारण पार्टीमा ठूलो असर गरेको पनि बताउनुभएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकजुट भएर अगाडि बढाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौं । एकजुट भएर जाऔं । यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन् । आज फेरि एकजुट भएर अगाडि बढौँ ।’
‘हामी अझै एक नम्बर छौँ, परमादेशबाट हटाइयो’
अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि तीन वटै तहमा आफ्नो पार्टी एक नम्बर शक्ति रहे पनि अदालतको फैसलाले आफूहरूको सरकार ढलेको बताउनुभयो । एमालेको सरकार ढाल्नका लागि देशी विदेशी शक्तिहरू लाग्दा पनि सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट हटाइएको बताउनुभयो ।
अहिले पनि तीन वटै तहमा आफ्नो दल प्रमुख शक्ति रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक धार हो ।’ उहाँले नेपाली कांग्रेसप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै दमनकारीहरूसँग मिल्ने गरेको बताउनुभयो । तीन महिनाको अवधिमा दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभएको ओली कांग्रेसले आफ्नो साथ नदिएको आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रवादीसँग नमिल्ने दमनकारीसँग मिल्ने नीति कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै लिएको हो । प्रगतिशील शक्तिसँग नमिलेर जनशक्ति कमजोर भो । १७ सालको ‘कु’ हँुदा त्यसका विरुद्ध उत्रिने जनता भएन । आज पनि यो लागू हुन्छ ।
माधव पक्षको स्पष्टीकरण- ओलीले राजीनामा दिए मात्रै एकता
आफूहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र थमाइएपछि नेपाल समूहले अब एकताका प्रमुख मुद्दा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा बनाएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीभित्र अपमान सहेर बस्न नसकिने बताउनुभयो । दोस्रो अध्यक्षको प्रस्तावप्रति लक्षित गर्नुहुँदै उहाँले अपमान सहेर पार्टीभित्र बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको हो ।
पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले पार्टीबाट कोही पनि व्यक्ति त्यतिकै नजाने तर एकताका नाममा अपमान पनि सहेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कसले बनेको घरबाट त्यत्तिकै निस्कन चाहन्छ ? तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन । सबै खालका कुकर्म हुँदाहुँदै त्यसलाई सहेर कोही पनि बस्न हुँदैन । त्यो प्रशिक्षण हामीले पाएका छैनौं ।’
नेता नेपालले आफू लक्षित नारा जलुसहरूको सन्दर्भमा पनि जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले बालकोट प्रवेश गर्दै गर्दा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अहिले बाँदर जुलुस निकाल्ने, कहिले बरण्डामा उफ्रिने नाटक मञ्चन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसले प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामना समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आपराधिक, जालझेल, फटाहा, त्यस्ता खालका तŒवहरूको स्याल हुँईयाँ, कहिले बाँदरे जुलुस, कहिले बरण्डामा उफ्रिने, त्यस खालका जुन नाटक मञ्चन भइरहेको छ, यी सबैैबाट समाजलाई र सिंगो पार्टीलाई कसरी मुक्त गर्ने ? भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि, यी कुराबाट शिक्षा प्राप्त गरेर, कमीकमजोरी सुधारेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने कुरामा आजको दिनले सबैमा चेतना दिन सकोस्, प्रेरित गर्न सकोस् ।’
नेता नेपालले वैचारिक एकमा एक ठाउँमा नबस्दासम्म एकताको कुने अर्थं नभएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नले नभई सुनामले अघि बढने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी एकढिक्का भएर मात्रै हुँदो रहेनछ । सही वैचारिक जगमा उभिएको छ भने त्यो पार्टीको उपाध्येयता हुँदोरहेछ । वैचारिक धरातल ठिक छ कि छैन ? देश भक्तिको भावना भरिपूर्ण छ कि छैन, जनताप्रति समर्पित छ कि छैन ? समाज रूपान्तरण, समाजवाद निर्माणको बाटोमा सही हिसाबले अगाडि बढेको छ कि छैन ? त्यसका नेता, कार्यकर्ताहरू इमान्दार छन् कि छैनन् ? त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाले ओतप्रोत छन् कि छैनन् ? व्यक्तिवादी भए कि, अहंकारी भए कि, स्वार्थी भए कि ? आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टीको नाम र झण्डा दुरुपयोग गरिरहेका छन् कि ? यी सबै कुराहरूप्रति सतर्क हुँदै गलत कुराको विरुद्ध विद्रोह गर्ने आँटका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह्ले नभई सुनामले अघि बढ्दछ ।’
नेता नेपालले पिपुल्स भोलेन्टियर घोषणा गर्नुभएको छ । बिहीबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित ४३ औँ पुष्पलाल स्मृति दिवस तथा ‘पिपुल्स भोलेन्टियर’ घोषणा कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले एक हजार एक सदस्यीय पिपुल्स भोलेन्टियर घोषणा गर्नुभएको हो ।
पिपुल्स भोलेन्टियरको प्रमुखमा शिव श्रेष्ठ तथा सचिवमा मनोज खत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको वरिष्ठ नेता नेपालले कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । पिपुल्स भोलेन्टियर घोषणा गर्दै उहाँले यो कम्युनिष्ट विचारबाट अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले युवाहरूलाई मानिसमा हुनुपर्ने राम्रो गुणहरू सिक्न र नराम्रो बानी त्याग पनि आग्रह गर्नुभयो । भोलेन्टियरले अरूले जे गर्छ त्यो नगर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आफूहरू हिम्मतिलो र परिवर्तन गर्न चाहाने युवा पंक्ति तयार गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै युवाहरूले जनसेवा, देशभक्ति र लोकतन्त्रकाले लागि अघि बढ्न अपिल पनि गर्नुभयो ।
वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरूसँग सही विचार भएको उल्लेख गर्दै सही विचार हुनेहरू आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो । सहि बिचारको पक्षमा हजारौँ मान्छे पछि लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ताको तयारी भएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलका सदस्यहरूको पहलमा दुई नेता भेटवार्ताका लागि तयार हुनुभएको हो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुवै नेता भेटवार्ताका लागि तयार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुरा गर्दा उहाँहरू भेट्न सहमत हुनुभएको छ’, ‘समय र स्थान तय भइसकेको छैन । तर, जुनसुकै बेला पनि भेटवार्ता हुन सक्छ ।’
नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले पनि दुई नेता भेटवार्ताका लागि सहमत भएको बताउनुभएको छ । विवाद समाधान गर्न कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन र पछिल्लो ओली र नेपालमाथि उनीहरू निकटकै नेताहरूको पनि दबाब बढेकाले दुई नेताबीच भेटवार्ता भएर विवाद समाधानको दिशातर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अघिल्लो लेख कार्यकारिणी समितिको सनाखतबाट जसपा विवाद टुंग्याउँदै निर्वाचन आयोग।
पछिल्लो लेख टेकुमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप प्रमाणीकरणमा भीड, विदेश जानेलाई सास्ती।